बच्चाहरु स्पन्जले जस्तै जानकारी अवशोषित। त्यसैले यसलाई सही तरिका तिनीहरूलाई मा सिखाना जन्म देखि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खाद्य संस्कृति - आजको समाजमा आवश्यक छ भन्ने कुरा। Tableware किंडरगार्टन मा किनभने inculcated आदेश र आधारभूत dogma, जीवनमा प्रयोग गर्न भविष्यमा बच्चाहरु रूपमा, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं शिक्षकहरू र पूर्वप्राथमिक मा नर्स जान्नु आवश्यक भन्ने तथ्यलाई, लेख मा कुरा।
किन तालिका राख्नु आवश्यक?
किन सबै किंडरगार्टन मा अल्गोरिदम tableware आविष्कार धेरै आमाबाबुले आश्चर्य? सबै पछि, जुनियर समूहमा बच्चाहरु कटलरी र क्रकरी को एक न्यूनतम प्रयोग गर्नुहोस्। तर शिक्षकहरूलाई यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि दाबी गर्छन्। सही सेवा धन्यवाद निम्न प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न:
भोजन समस्या। अक्सर बच्चा वाक्यांश सुन्न सक्नुहुन्छ: "म चाहँदैनन् र म गर्दैनन्।" सुन्दर सजाया तालिकाले भोक जगाउँछ।
आधारभूत सिक्ने तालिका मा व्यवहार को नियम। एक प्रारम्भिक उमेर देखि बच्चा एक चम्चा र काँटा छ जो पक्ष थाहा छ।
अनुशासन। शिक्षकहरूलाई को दोस्रो कान्छो समूह संग शुरू तालिका सेटिङ केटाकेटीलाई आकर्षित छन्। कर्तव्य तोकिएको हो, भाँडा, उपकरण, पट्टियां र यति मा को जानेबेलामा लागि जिम्मेवार छन्।
बाल सदन मा उचित तालिका सेटिङ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, बच्चाहरु समाजमा बाँच्न र आधारभूत नियमहरू सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ।
हामी सही पूर्वप्राथमिक मा एक तालिका सेवा
बाल सदन योजना मा tableware प्रत्येक पूर्वप्राथमिक लागि कटिबद्ध छन्। मूलतः शिक्षकहरूलाई शास्त्रीय नियम पालन। तिनीहरूलाई आधारित प्लग बाँयामा स्थित हुनुपर्छ, चक्कु - दाँया मा, तर चमचा तालिका समानान्तर झूठ गर्न।
नास्ता लागि, भोजन मात्र सेवा गर्दै छोराछोरीलाई तालिका आउन गर्दा। यो शांत समय छैन खाना सुनिश्चित गर्न गरिन्छ। केन्द्र मा रोटी, घिउ, पट्टियां एउटा सानो पकवान छ। धेरै शिक्षकहरूलाई फूल संग टेबल सजाउनु। तर यो छोराछोरीको एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन ताकि सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ।
अग्रिम तालिका मा खाने मा compote संग चश्मा पर्दाफास। खाना बाँकी समूहहरु मा प्लेट गर्न ल्याए। सानो प्लेट - जवान समूहमा उच्च मा मात्र गहिरो भाँडा प्रयोग।
तल प्रतिनिधित्व छ जो बाल सदन चित्रमा tableware, हेरविचारकर्ताओं सामान्य नियम द्वारा लगे हुनुपर्छ। यो मनमोहक छ र आमाबाबुले तिनीहरूलाई, छोराछोरी र एउटै नियम र dogmas प्रयोग घर बारेमा जान्न।
सुझाव र शिक्षकहरू गर्न सल्लाह
बच्चाहरु सक्रिय तालिका सेटिङ भाग लिन को लागि क्रममा, र शिक्षकहरूलाई दैनिक बच्चाहरु बीचमा पकड कर्तव्य सुझाव दिन्छौं। यो बोट लागि नर्स लेखे जो तालिका सहायता विशेष क्षेत्र छ। धेरै कर्तव्य aprons वा अन्य विशिष्ठ चिह्न मा लगाउन मूल।
शिक्षकहरूलाई तिनीहरूले केही काम गर्दैन छ पनि भने, बच्चाहरु वफादार हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई यसो भन्दै कराउन थाल्छन् वा गाली गर्न को लागि यो आवश्यक छ। तिनीहरू अझै पनि सानो हो, त्यसैले दायाँ सबै गर्न सक्नुहुन्न। endearment र व्याख्या मात्र तिनीहरूलाई सबै भन्दा राम्रो हुन र दायाँ सबै गर्न इच्छा रोपेर हुनेछ।
साधन ठीक मोटर कौशल सेवा विकास, बच्चालाई "सही" र अवधारणा बुझ्न सुरु "बाँकी।" वरिष्ठ समूहमा शिक्षकहरू छोराछोरीलाई स्वतन्त्र तालिका सेट गर्न अनुमति दिन्छ।
बाल सदन मा tableware - प्रक्रिया एकदम महत्वपूर्ण र रोमाञ्चक छ। बच्चाहरु को लागि यो भाँडा उज्ज्वल र मूल थिए महत्त्वपूर्ण छ। एक धेरै ठूलो गल्ती र शिक्षकहरूलाई - विभिन्न ढाँचासँग बच्चाहरु प्लेट किन्न। यस कारण, अक्सर बच्चाहरु को बीच संघर्ष र quarrels सल्काउनुभयो। यो सबै कुरा मनोवैज्ञानिक पूर्व-स्कूलमा बच्चा उहाँले छुट्टै व्यक्ति हो भनेर बुझ्न पर्छ भनेर जिद्दी भन्ने तथ्यलाई बावजुद बराबर थिए, राम्रो छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण नियम - उपस्थिति तालिका पट्टियां मा। तिनीहरूले फूल, जनावर, परी कथा वर्ण को तस्वीर संग, रंगीन हुन सक्छ। यो मात्र खाने मा छोराछोरीको चासो वृद्धि हुनेछ।
एक किंडरगार्टन तालिका सेवा - एक अनिवार्य प्रक्रिया हरेक दिन प्रदर्शन गर्न। यो बर्तन र उपकरण नै नियम द्वारा प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण छ। दाँया मा - तपाईं क्लासिक युरोपेली शैली चयन भने, प्लग बायाँ र चक्कु हुनुपर्छ।
एक shish Kebab लागि coals कसरी चयन गर्ने?
खाना पकाउने nuances, पानी र भात pilaf सही सन्तुलन: pilaf कसरी खाना पकाउनु
प्रति तपाईं खान लसुन सक्नुहुन्छ दिन कति: उपयोगी सुझावहरू
कफी सिमी को प्यानल। आफ्नै सुगन्धित तस्वीर सिर्जना
कारणहरू र उपचार: मा exertion Dyspnea
जुडाइहरूको पैराडेक्स (सोचा प्रयोग): व्याख्या